UPhilips wenza izibane zakhe zeHue zingqungqe kwisandi seSpotify | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 01/09/2021 17:37 | ngokubanzi, Izaziso
Kungekudala Philips Uqhube umsitho onomdla kakhulu esiye sakwazi ukubakho kuwo nalapho siye sabamba khona ukuba zeziphi iindaba ezilandelayo kwinqanaba lehardware kunye nesoftware licandelo leHue kwinxalenye eseleyo yonyaka ka-2021.
Ngeli xesha sima kwintsebenziswano enomdla kakhulu, enyanisweni, asazi ukuba umntu ebengacingi ngayo ngaphambili. I-Spotify kunye neqela lePhilips ukuze uvumelanise umculo wakho kunye neebhalbhu zakho zokukhanya kunye nokudala imeko ezinamandla. Ewe abafana baseSpotify abayeki ukusothusa ngezicelo ezahlukeneyo zomculo wabo osasazayo.
Ayisiyiyo yonke into esele siyibonile iyisoftware, kwaye kukuba icandelo leHue libhengeze ibha yokukhanya entsha kumabonwakude, kunye nokuphuculwa okuncinci kwezinye zeebhalbhu zayo ngoku ezisebenza ngokuqaqambileyo. Nabani na onekhaya elipheleleyo kunye noPhilips Hue njengokuba kunjalo, uya kwazi ukuba ezi bhalbhu azibonakalwanga ngokuchanekileyo ngamandla abo okukhanyisa.
Ngoku sineendaba zomculo kwabo basebenzisi bePhilips Hue abonwabela iibhalbhu zokukhanya ezinoluhlu lwemibala okanye izixhobo ezahlukeneyo zeRGB. Ukuba uya kwicandelo lokonwaba lesicelo seHue kwizixhobo zefowuni, uya kuba nakho ukungqamanisa inkqubo yakho neSpotify Kwaye iya kukunika ithuba lokudibanisa umculo wakho kunye nezibane zakho, uya kwenza ukuba izibane zidanise ngokoqobo.
Eli nqaku sele likhutshiwe, Kuya kufuneka uhlaziye usetyenziso lwakho lwePhilips Hue kwaye ulandele amanyathelo akhankanywe apha ngasentla. Thatha eli thuba ukhumbule ukuba uPhilips Hue unemethadatha yeengoma, ke ukubonwa kwethiyori akuyi kuthatha kulibaziseka ngomculo. Okwangoku, ungaqhubeka nokubheja kwizibane zakudala. Khumbula ukuba kwiActualidad Gadget Sinezifundo ezininzi kwiYouTube ngendlela yokuzihlanganisa izixhobo zakho zokukhanyisa ekhaya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » UPhilips wenza izibane zakhe zeHue zingqungqe kwisandi seSpotify
I-Vacos Baby Monitor, uhlalutyo kunye nokusebenza